Azo heverina fa matoa mitovy lanja avokoa dia efa misy mpanjifa na mpambongady mpandray ny entana. Hatreto, mbola andrasana ny niaviany sy ny lalan-kizoran’ireo zava-mahadomelina ireo. Fiara sendra niantsona teo Anosizato atsimo atsinanan’ny tetezana no nisy nahatsikaritra ka velon’ahiahy raha nahita entana tsara fono. Ny sabotsy 22 jona teo tamin’ny 5ora sy sasany maraina no naharay antso avy amin’ny olona tsara sitrapo ny sampana miady amin’ny mahadomelina (STUP) mahakasika ny fiantsonana fiara iray, izay nametraka entana mampiahiahy mifono plastika mainty maromaro. Nandray andraikitra avy hatrany ny polisy nidina teny an-toerana nizaha ireo entana. Tao ambadiky ny «castel motel» no tratra ilay fiara. Rehefa nosavaina dia rongony no tao izay notsindrina gony. Mitohy ny fanadihadiana. Velom-panontaniana ny amin’ny fitosahan’ny zava-mahadomelina eto an-drenivohitra ny mpanara-baovao.